ओमकार टाइम्स राती निन्द्रा नलाग्ने समस्या छ ? अपनाउनुहोस यी उपाय – OMKARTIMES
राती निन्द्रा नलाग्ने समस्या छ ? अपनाउनुहोस यी उपाय
काठमाडौँ । निद्रा भनेको हाम्रो जीवनको आधारभुत आवश्यकता हो । आधारभुत आवश्यकतामा खाना, पानी, निद्रा, सेक्स आदि पर्छन् । २४ घण्टामा कमसेकम ७ देखि ९ घण्टासुत्न सक्यो भने शरीरलाई फाइदा हुन्छ।
त्यसपछि करिव ५० मिनेट गहिरो निद्रा हुन्छ। गहिरो निद्रामा पुगेपछि मानिसलाई उठाउन गाह्रो हुन्छ र साइकलको अन्तिम १०-१५ मिनेटमा सपनाहरु आउने हुन्छ । यसरी ढेड घण्टाको एउटा साइकल हुन्छ।
निद्रामा करीब ५–६ वटा साइकल पुरा गर्नुपर्छ ।यसरी निद्रा साइकल पुरा भयो भने हामी बिहान उठिसकेपछि फ्रेसको महसुस गर्दछौ । निद्रा नलाग्न कारणहरु के के हुन् र निद्रा नलाग्ने कारणहरु धेरै छन्। शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आध्यात्मीक कारणले गर्दा मानिसमा निद्रा नलाग्ने हुन्छन्।
शारीरिक कारणमा धेरै किसिमका शारीरिक रोग, टाउको दुख्ने, भोक नलाग्ने, बिभिन्न किसिमका शारीरिक पिडाहरु हुन्छन् । सामाजिक कारणमा तनावहरु जस्तै आर्थिक, पारिवारीक, व्यक्तिगत तनावले गर्दा पनि निद्रा लाग्दैन। त्यसैगरी आध्यात्मिक मानिसहरुमा योग, व्यायाम ग¥यो भने र इच्छा पूरा ग¥यो भने निद्रा लाग्ने हुन्छ । अर्को मनोवैज्ञानिक कारणहरुमा डिप्रेशन, एन्जाइटी लगाएतका रोगहरु पर्दछन्।
हामीहरु दैनिक ८–९ घण्टा सुत्ने गर्छौं तर नार्कोलेप्सी भएकाहरु त्यो भन्दा धेरै बढी सुत्ने हुन्छन् । साथै कोहीकोहीलाई दिउँसो निद्रालाग्ने भनेको धेरै खाना खाएपछि हो । यसमा मानिसलाई एक्कैछिन मात्र निद्रा लाग्छ र फ्रेस हुन्छ । दिउँसो निद्रा लागेर दैनिक कार्यमा धेरै असर ग¥यो भने केही औषधिहरु खानुपर्ने हुन्छ तर नेपालमा यो औषधि हालसम्म उपलब्ध छैन।
यदि दिउँसो निद्रा लाग्छ भने सकमेसम्म ननिदाउनु नै उचित हुन्छ । निद्रासँग सम्बन्धित कस्ता समस्याहरू देखिन्छन् रु धेरै रोगहरु निद्रासँग सम्बन्धित हुन्छ । डिप्रेशन, एन्जाइटी जस्ता बिभिन्न रोगहरुमा निद्रा नै पहिलो समस्या हो ।डिप्रेशन, एन्जाइटी तथा अन्य मनोवैज्ञानिक रोगको पहिलो लक्षण नै निद्रा नलाग्नु हो।
यसबाहेक रोगलाग्दा, चिन्ता, दुखाई, डर, मानसिक तनाव आदीका कारणले पनि निद्रा नलाग्ने हुनसक्छ । कुनै रोग नलागि विभिन्न कारणले मानसिक तनाव हुने र त्यसले निद्रा नलाग्ने हुनसक्छ । निद्रा नलाग्ने समस्याहरु पनि विभिन्न किसिमका हुन्छन्। कहिले काँही थकानले सुत्न लागेपछि १र२ घण्टासम्म निद्रा नलाग्ने वा २ देखि ३ घण्टापछि निद्राखुल्ने र फेरी निद्रा नलाग्ने हुन्छ।
राती निद्रा खुलेर पुनः सजिलै लाग्छ, भने यो रोग भने होइन । निद्रामा बरबराउने किन हुन्छ र बरबराउनु रोग हो रु निद्राको साइकल हुन्छ । त्यो साइकल पार गर्दै जाँदा सपनाहरु आउने हुन्छ । सबै मानिसलाई प्रत्येक दिन सपना आउँछ तर जसलाई निद्राको समस्या हुन्छ, त्यस्ता मानिसले धेरै सपना देख्ने हुन्छ।
१) छिटो सुत्ने
२) एउटै समयमा सुत्ने र उठ्ने
३) निदाउनको लागि मदिरा नपिउने ४।चुरोट÷सुर्ती सेवन नगर्ने
५) भोकै नसुत्ने तर हल्का मात्रै खाने ६। नियमित शारीरिक गर्ने
७) सुल्नु भन्दा पहिले करिव आधा घण्टा आराम गर्ने
८) निद्राको लागि औषधी प्रयोग नगर्ने
९) सुत्नु भन्दा पहिले मनतातो दुध वा पानि पिउने
१०) सुत्नु भन्दा पहिले मन तातो पानीले नुहाउने